साइबर चौतारी: ठगी गर्ने ईमेल
ठगी गर्ने ईमेल
त्यसो त उनी सँग मेरो ब्यवसायीक परिचय मात्र थियो । त्यो परिचय पनि फोनमा मात्र सिमित थियो । न उनले मलाइ देखेका थिए न मैले उनलाइ देखेको थिए । म उनलाइ मेरो अफिसको कामको सिलसिलामा सम्पर्क गर्थे । उनको काठमाण्डौमा ट्राभल ऐजेन्सी भएको र व्यपारकै लागी भए पनि इन्टरनेटमा उनको राम्रो पहुचँ (?? पकड) भएको कारणले धेरै जसो हामी ईमेल सम्पर्कमा रहन्थ्यौ ।
एकाविहानै अफिस पुगेर मेल हेर्दा उनि मलेसियामा लुटीएर अलपत्र परेकोले वेष्ट्रन युनियन वाट पैसा पठाइ दिन भनेको ईमेल पाँए । ईमेल पढी सकेपछी सबभन्दा पहिले मलाइ हासो उठ्यो । यो भन्दा पहिले पनी यस्तै मेल बाट धेरै जना ठगिएको मैले थाहा पाएको थिए ।
Presently I have limited access to internet, I will like you to assist me urgently withasoft loan of $2,400 US dollars to sort-out my hotel bills and to get myself back home. I have spoken to the embassy here but they are not responding to the matter effectively, I will appreciate whatever you can afford to assist me with, I'll Refund the money back to you as soon as i get home without any delay. Please use the details below to send the money to me via Western Union money transfer because that is the only way i could be able to get the money fast and leave. Here's my info below...
Address: 17A, Jalan Kuchin Seksyen, Mahkota Melaka, Malaysia
मेरो विचारमा यस्तो समस्यामा त्यसै परिदैन । धेरै जान्ने वा धेरै सेक्युरिटी कन्सीयस भएको जस्तो गरि काम गर्न थाले यस्तो हुन थाल्छ । कम्युटर भाईरस मालवेयर वा ट्रोजनले प्रयोगमा रहेको कम्युटरवाट पासवर्ड चोरी गरे मात्र नत्र आज सम्म हटमेल, जिमेल वा याहुमेल को ईमेल सर्भर ह्यक भएको छैन । र कुनै य कम्पनीले सन्चालन गरेको डाटावेस सर्भरमा स्टोर भएको पासवर्ड जे भए पनि ति कम्पनीलाइ फरक पर्दैन । साधारणतय ति पासवर्ड ईन्क्रिप्टेड हुन्छ । त्यसैले ईमेल पठाएर कहिले पनि मेल सेवा प्रदायकले पासवर्ड चेन्ज गर भन्दैन । गर्नै परे लगईन गरे पछी त्यही साईट भित्रै वाट यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ ।